Sawiro ciyaareed la soo uruuriyay - BBC News Somali
Sawiro ciyaareed la soo uruuriyay
Waa sawiro la xiriira ciyaaraha adduunka oo ay soo uruuriyeen weriyayaasha BBC, oo ka tarjumaya xiisaha ciyaaraha adduunka ee Africa.
Dahlinyar, oo maalintooda ku bilaabaysa ciyaar ay ku yeelanayaan magaalada Maradi ee dalka Niger.
Taageerayaasha maroodiyada oo u damaashaadaya tartan kale oo goolal badan ay kooxdu kaga badisay kooxda Burkina Faso tartan ka dhacay garoonkta Blockos ee Abdijan.
Sawirka Ciyaaryahanka kooxda Ghana Michael Essien oo lagu xardhay bus ka shaqeeya gudaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Wiil yar oo la yiraahdo Atom ayaa kubad baleejeynaya magaalada Sokoto ee waqooyiga Nigeria.
Drogbayaasha, Rooney-yaasha iyo Messi-yaasha mustaqbalka oo ka soo baxaya magaalada Kibera oo in yar ka baxsan caasimadda Kenya.
Sawirka ciyaaryahanka Cameroon Samuel Eto'on oo hoos kuu soo eegaya, iyadoo lagu dhajiyay boor aad u wayn gudaha magaalada Nairobi.
Sawir xusuuseed kooxda loo yaqaanay Leopards, ee xilligaa ahaa Zaire, hadana ah Jamhuuriyadda Demoqraadiga ah ee Congo, markii ay ka qaybgaleen ciyaarihii adduunka ee sanadkii 1974 - Waxay ahaayeen kooxdii ugu horaysay ee ka timaada wadamada Saharaha ka soo hooseeya ee tartanka ka qaybgasha.
Dabaaldega taageerayaasha Ivory Coast markii kooxdu u soo baxday koobka adduunkaiyagoo jooga garoonka kubadda cagta ee Felix Houphouet-Boigny, kadib markii ay ka badiyeen dalka g Guinea.
Nin ganacsade ah oo muujinaya qalab ciyaareed iib ah suuq ku yaalla meel u dhow garoonka ciyaaraha ee magaalada Nairobi.
Haweenay ag maraysa garoonka Nyayo ee magaalada Nairobi.
Kubadda cagta aad loogama xiiseeyo gudaha dalka Ethiopia, waxaad ka arki kartaa sida garoonku umaran yahay, inkastoo ciyaar horyaalka dalka ah ay socoto. Taa badalkeedase ciyaaryahanka orodka ayaa boqor ka ah Ethiopia.
Ugu dambayntii, 3 arday oo sawirka isku diyaariyay kadib markii ay dhamaatay ciyaar ka dhacaysay jaamacad ku taalla gudaha Jaamacadda Enugu, ee dalkaNigeria. Waxaad kaloo ka qayb qaadan kartaa taxanaha xumadda kubadda cagta, adioo noogu soo diraya sawiradaada ciyaaraha quruxda badan emailkan: yourpics@bbc.co.uk.